Home Wararka Gudaha Hoggaanka Xisbiga WADANI Oo Digniin U Diray Ciidamada Somaliland
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADANI ayaa ugu baaqay in saraakiisha ciidamada iyo askartaba ay ka digtoonaadaan ku milanka siyaasadda.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro), ayaa ciidamada uga digay in ay siyaasadda faraha la soo galaan, xilli Somaliland ay ka taagan tahay khilaaf u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada haya ee Kulmiye.
Xisbiyada mucaaradka ayaa lagu wadaa in ay maalmaha soo socdo ay magaalooyinka Somaliland ay ku qabtaan bananbaxyo ay kaga soo horjeedaan mudda kororsi la sheegay in uu sameysto madaxweynaha Somaliland.
“Bannaan-baxa iyo muujinta dareenka Shacbigu waa xaq Dastuuri ah, waana uu dhacayaa cid xaq u leh oo is-hortaagi kartaana ma jirto, qorshihii iyo diyaar-garawgii isu soo baxa nabadeedna sidiisii ayuu u socdaa. Hay’adaha amniga waxaa ku waajib ah ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta oo uu ka mid yahay xaqqa cabbirka ra’yiga iyo bannaan baxuba” ayuu yiri Cirro.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi (Cirro), ayaa ciidamada ugu baaqay in ay banaanka ka noqdaan isqabqabsiga siyaasadeed ee ka taagan Somaliland.
“Ciidamadda qalabka sida waxa aan uga digayaa in ay ku milmaan murranada siyaasadda ee Xukuumadda xilkeedu sii dhammaanayo ee ay dalka ka waddo. Ciddii gaysata gef iyo xad-gudub waxaa ka dhalan doona ciqaab iyo isla-xisaabtan, Shacabka & Sharciguba midna saamixi maayo. Dhawaan waxaa dhalan doonna isbeddelka Shacbigu hoggaaminayo 13November2022” Sidaasi waxaa yiri Cabdiraxmaan Cirro.
Sikastaba xisbiyada mucaaradka ayaa ku baaqay in doorashada madaxweynaha lagu qabto waqtigeeda maadama uu dhamaaday waqtiga madaxweynaha talada hayo ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, isagoo xafiiska baneynayo bila yar kadib.
Previous articleNabih Berri Oo Markii Kale Loo Doortay Guddomiyaha Baarlamaanka Lubnaan
Next articleXasan Sheekh Oo Baaq U Diray Shacabka Soomaaliyeed